एजेन्सी । चीनिया अभिनेत्री क्लाउडिया किमले पनि कुनै न कुनै दिन बलिउडको दुनियामा नयाँ अनुभव लिनेछिन् । अभिनेत्री किमले न्युज एजेन्सी आईएएनएसलाई भनेकी छन्, ‘मेरो धेरै साथीहरु छन्, जो यस उद्योगमा काम गरिरहेका छन् ।
मण्डला थिएटरमा अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवम भाग लिएको नाटक ‘उपियाँको निवन्ध’
काठमाडौं । हालसालै भारतको कोलकता अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा सहभागी भएर आएको नाटक ‘उपियाँको निवन्ध’ मण्डला नाटकघर अनामनगरमा मञ्चन भइरहेछ ।
अजबगजबको सौखः यी अभिनेतासँग छन् ३ सय ६९ कार
फिल्मी दुँनियासँग जोडिएका स्टारहरुको कार क्रेज त सबैलाई थाहा छ । उनीहरु महंगामहंगा लक्जरी कारहरु चढने गर्छन् तर तपाईलाई यो थाहानहुन सक्छ साउथका मलायलम र तमिल फिल्मका सुपरस्टार ममुटीसँग एक दुई मात्रै होइन उनीसँग ३६९ वटा कार छन् ।
दीपिका र क्याट्रिनाको सम्बन्धमा सुधार !
एजेन्सी । अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अर्की अभिनेत्री क्याट्रिना कैफको सम्बन्धमा उतार चढावको समाचारहरु आइरहेका छन् । जसको कारण अभिनेता रणवीर कपुर हुन् । यता अभिनेत्री दीपिका र रणवीर सिंह बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएका छन् ।
पहिलो 'द भोइस अफ नेपाल' बने सिडी विजय अधिकारी
काठमाडौं । नेपालको चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भोइस अफ नेपाल’ को पहिलो संस्करणमा सिडी विजय अधिकारी विजेता बनेका छन् ।
सन्नी लियोनीको शरीर किन फिट छ ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीको शरीरको चर्चा खुबै चल्ने गर्छ । हुन पनि हो उनको शरीर एकदमै फिट छ । यसको लागि शन्नी आफ्नो फिटनेशमा हमेसा ध्यान दिने गर्दछिन् । उनी आफ्नो बडी फिट बनाउन कडा अभ्यास गरिरहन्छिन् ।